ဗုဒ္ဓဘုရား၏ အရိယသစ္စဓမ္မကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ဟောဖော်ညွှန်
ပြသော အရိယသစ္စာတရားဓမ္မများကို သိမြင်နိုင်စေရန်အတွက် အရိယသစ္စဓမ္မ Website တစ်ခု ထပ်မံ စီစဉ်ပေးလိုက်ပါသည်။ လေ့လာလိုသူများ www.ariyathitsa.eu.pn တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ (Beta Version) Read >>
ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၌ ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမ မဟုတ်သော ပရမတ္တသစ္စာတရားများက နေရာယူနေပြီး ဘုရားရှင်၏ “ အရိယသစ္စာ အဆုံးအမ ”များ ကွယ်ပျောက်နေသည် ကို သိရှိရ၍ အရိယသစ္စာတရားကို ကြိုးစားရှာဖွေဖော် ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ၀ါဒသည် “ကမ္မ၀ါဒ” သာ ဖြစ်၍ ကံသံသရာလည်ပုံကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်စေ ကာ အရိယသစ္စာတရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ရောဟိတဿသုတ်အရ လောကသုံးပါး၊ ၀ဋ်ဒုက္ခတရားနှင့် အရိယသစ္စာတရားတို့သည် လူ၏ ဤသက်ရှိ အမှတ်သညာရှိသော တစ်လံမျှ ကိုယ်ကာယ(ပေါ်)၌သာ ရှိကြောင်း၊ ရှေ့ဘ၀ပုဗ္ဗန္တာနုဒိဋ္ဌိ၊ နောင်ဘ၀ အပရန္တာနုဒိဋ္ဌိ၊ သဿ တနှင့် ဥစ္ဆေဒ အစွန်း၊ အန္တဂ္ဂါဟိကဒိဋ္ဌိစွန်းများမှ လွတ်မြောက်ကာ ဘုရားရှင် သိရှိဘုရားရှင်သိရှိ ခဲ့ရသည့် အရိယသစ္စာတရားကို ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိသိမြင်ခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် သိရှိခဲ့သည့် အရိယသစ္စာကို ဘုရားသာဝကပီပီ တွေ့မြင်ရသည့်အခါ အဘိုးမဖြတ်နိုင်သော ပျောက်ဆုံးနေသည့် ရတ နာပစ္စည်းကို ပြန်လည်ရရှိသည့်အလာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့်ဆရာတော်သည် မိမိအမှန်တကယ်သိမြင်သော အရိယသစ္စာ အသိအမြင်ဖြင့် ၁၉၈၁ - ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့သစ်ဦးစ နိုင် ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများထံသို့ ဘုရားမယူသော ရှေ့ဘ၀ နောက် ဘ၀ အယူများကို မဟော မပြောကြ ရန် လျှောက်စာတင်ပြသည့်အခါ “ဗုဒ္ဓပဋိကုဋ္ဌ”ဟု အသတ်မှတ် ခံရသည့်အပြင် နောင်တွင် စတုတ္ထပါရာဇိကဖြင့် မှားယွင်းစွာ ၀ိနိစ္ဆယ အပြု ခံခဲ့ရရှာသည်။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားကား ယနေ့ထေရ၀ါဒ၏ ပရမတ္ထဓမ္မ မဟုတ်၊ ဗုဒ္ဓတွေ့ရှိညွှန်ပြခဲ့သော အရိယသစ္စာဓမ္မသာ ဖြစ် သည်။ ယနေ့ထေရ၀ါဒသံဃာသည် ပရမတ္ထဓမ္မကို ဘုရားဟောတရားဟု ထင်မြင်ယူဆကာ ကျင့်ကြံပွားများသည့် ပရမတ္ထသံဃာ သာ ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒကား အရိယသစ္စာကို ကျင့်ကြံပွားများသည့် အရိယသံဃာတို့၏၀ါဒဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ထေရ၀ါဒအမြင်၌ တရားချင်းမတူ၍ အရိယသစ္စာဓမ္မ ဟောပြော ကျင့်ကြံသူများကို ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀ မယူ သူများ၊ ရုပ်တရား၊ နာမ်တရား လက်မခံသူများ၊ အဓမ္မ၀ါဒီများဟု သမုတ်ကြ၏။ အမှန်စင်စစ် ဘုရားရှင်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပင် အရိယသစ္စာဓမ္မများကိုသာ (၄၅) ၀ါ ကာလပတ်လုံး ဟောပြောသွားကြောင်း ပါဠိတော်ပိဋကတ်၌ အထောက်အထား အခိုင်အမာရှိ၏။ အရိယသစ္စာဓမ္မမျာသည်း ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ တရားဂုဏ်တော် (၆)ပါးနှင့် တိုက်ကြည့်က ညှိကြည့်က အဓမ္မ မဟုတ်၊ ဓမ္မများသာ ဖြစ်
ကြောင်း တွေ့ရှိသိမြင် နားလည်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘုရား၏ အရိယသစ္စဓမ္မကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ဟောဖော် ညွှန်ပြသော အရိယသစ္စာတရားဓမ္မများကို သိမြင်နိုင်စေရန် အတွက် ဤ website ကို စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ အရိယသစ္စာ ဂရု (group) သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားခဲ့သည့် အရိယသစ္စာတရားဓမ္မတို့ကို လေ့လာသူများအချင်းချင်း အသိအမြင်များ ဆွေး
နွေးဖလှယ်နိုင်ကြစေရန်အတွက် အင်တာနက်မှတဆင့် တရားလေ့လာကြသော
နိုင်ငံတကာမှ အရိယသစ္စာမြတ်နိုးကြသူများမှ စီစဉ်ထားခြင်း. . Read >>
၁၃၇၅-ခု နယုန်လဆန်း ၃-ရက်နေ့ (11-6-2013) ရက်နေ့သည် ကျေးဇူးရှုင် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်၏ သက်တော် ၇၅-နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကို ပူဇော်သောအားဖြင့် တပည့်သာဝကများမှ စုစည်း၍ ဤမဂ္ဂဇင်းကို မွေးနေ့အမှီ စီစဉ်နိုင် ခဲ့ပါသော်လည်းပဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ယခုအခါမှသာ ဖြန့်ဝေရပါသည်။
ဖတ်ရှုလိုသူများ Download ဖြင့် ရယူကာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။. . . . . Read >>
တရားကို ပြန်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲ တရားရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ပဲ ရှာရမှာပဲ။ တရားရဲ့ အရည်အချင်းတော်ဟာ တရားရှာဖို့အတွက် ပစ္စည်းကလေးပဲ။ အဲဒါက "သွက္ခာတော ဘဂဝတာ ဓမ္မော၊ သန္ဒိဋ္ဌိ ကော၊ အကာလိကော၊ ဧဟိပဿိကော၊ သြပါနေယျိကော၊ ပစ္စတံ ဝေဒိတဗ္ဗော၊ ဝိညူဟိ"ဆိုပြီးတော့၊ ဒါကလေးဟာ တရားရဲ့ဂုဏ် . . Read >>
မိမိသည် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးအရွယ်ကပင် ဂေါတမဗုဒ္ဓရှင်တော် မြတ်ဘုရားကို ကြည်ညိုလေးစားသော မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘုရားကို ကြည်ညိုလေးစားသော မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ် ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မိမိသည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သည်ဟု မသိပဲ၊ မိမိကိုယ်ကို “ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုး ကွယ်သူ” ဟုသာ အသိရှိခဲ့ပါသည်။ Read >>
02_ အရိယသစ္စာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အညွှန်း
04_ ပစ္စုပ္ပန် ကမ္မ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ
05_ မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပြာ (၁)
06_ မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပြာ (၂)
07_ မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပြာ (၃)
08_ မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပြာ (၄)
09_ မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပြာ (၅)
10_ မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပြာ (၆)
11_ မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့်ပြာ (၇)
12_ သေပြီးနောက် ဖြစ်/မဖြစ်
13_ မိုးပြာဆိုသည်မှာ ဒီလိုပါ။
14_ ဗုဒ္ဓဘုရားကို ငိုစေခြင်း (သို့)
15_ မစိုးရိမ်စာသင်သားသို့ ကျေးဇူးတင်ခြင်း
16_ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်
17_ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး
18_ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်ဖြစ်ချင်လျှင်
19_ သာသနာဆိုတာ လူသားအတွက်လား၊ လူသားသည် သာသနာ အတွက်လား
20_ သရဏဂုံအား ချဉ်းကပ်ခြင်း
21_ ၀ါရိတ္တသီလ နှင့် စာရိတ္တသီလ
22_ စဉ်းစားစရာလေးများ (၁)…
23_ စဉ်းစားစရာလေးများ (၂ )…
24_ စဉ်းစားစရာလေးများ (၃)…
26_ ကြောင်းကျိုးဆိုတာ ဒီလိုလား?..
27_ Religious elder sentenced to 20 years in jail for peaceful practice of faith
29_ စဉ်းစား စာရာလေးများ (၄)…
30_ စဉ်းစား စာရာလေးများ (၅)…
31_ စဉ်းစားစရာလေးများ (၆)…
32_ အပိုနဲ့ အလိုတွေဟာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေပါ..
33_ လွတ်သင့်တာက . . ဘယ်ကလဲ
34_ “သေပြီးနောက် အကြောင်း ဗုဒ္ဓဘုရား မဟောကြားခဲ့ပုံ” သုတ္တံတရားများ
35_ သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က မိုးပြာဆရာတော်ကို အနိုင်ကျင့် ထောင်ချသလား
36_ အချိုမှုန့်ပမာ ယနေ့ခေတ်ဝိပဿနာ
37_ ယနေ့ခေတ် ဘာသာရေးမှ ဗိုင်းရပ် (virus) အယူများ (ပထမပိုင်း)
38_ ယနေ့ခေတ် ဘာသာရေးမှ ဗိုင်းရပ် (virus) အယူများ (ဒုတိယပိုင်း)
အရိယသစ္စာ Facebook - http://www.facebook.com/ariyathitsa
ဆက်သွယ်ရန်- ariyathitsa@gmail.com နှင့် ariyathitsa@yahoo.com လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။